Nzvimbo yePuddin - Hinds Feet Farm
Puddin's Place inzvimbo-ye-the-art, 6-mibhedha yemhuri yekuchengeta imba yevakuru vane zvinoshungurudza kana kuwana kukuvara kwehuropi. Imba ino yakagadzirirwa uye ine vashandi kuti vabate zvinonetsa zvinodikanwa zvevanhu vanoda pakati nepakati kusvika kune yakanyanya rubatsiro nezvido zvavo zvezuva nezuva (ADLs).
Mumwe nemumwe mugari anokurudzirwa kuita, kutaurirana uye kutora chikamu muzviitwa zviri kuitika zve Chirongwa cheZuva. Chiyero chekutora chikamu chemugari wega wega chichave chakanyatsogadzirwa kuti chikwidziridze kudyidzana kwavo munharaunda pamwe nerubatsiro rwekurapa panguva imwe chete vachiona nezvedanho ravo repamusoro rerubatsiro kana zvakakosha mukurarama kwezuva nezuva.
Nzvimbo yePuddin iri pane yedu Huntersville kambasi. Kero inoti:
Nzvimbo yePuddin inopa maawa makumi maviri nemana, mazuva manomwe pasvondo mabasa ekuchengeta munhu (kugeza, kupfeka, kushambidzika, kuchengetedza imba, kuronga chikafu nekugadzirira, nezvimwewo) nekutarisira. Imba yacho ine vashandi zvichibva pamaawa gumi nemaviri akasvinura vashandi vanochinja. Kuchinja kwezuva kunoitika pakati pe24am-7pm, uye kuchinja kwehusiku kunoitika pakati pe12pm-6am. Isu tinochengetedza hushoma hwe7: 6 mugari wevashandi.
Mugari wega wega achave nekamuri yakasarudzika yakasarudzika inosanganisira hombe yekufamba-muwadhiropu. Kamuri rega rega rakagadzirirwa kuti rive nemahwindo maviri akakura ane maonero ane runyararo epurazi redu remaeka makumi matatu nematanhatu. Vagari vanozogovana imba yekugezera nevakawanda vevamwe vagari vaviri uye vanopihwa yavo yerineni / zvimbuzi kabati yekuchengetera zvinhu zvavo. Zvirongwa zvedu zvekudya zvinovaka muviri zvakagadzirwa nemaune kuti zvizadzise zvidikanwi zvechikafu uye zvehutano zvemugari wega wega. Kudya kwese kuchagadzirwa nemhando yepamusoro-soro yekudya kunosanganisira zvakasiyana siyana zvezvirimwa zvinorimwa munharaunda uye pano papurazi. Pamusoro pezvo, kamuri nebhodhi remugari wega wega zvichasanganisira zvekushandisa, mabasa ekuchengetedza imba, zvekufambisa zvishoma, uye kuwana kuChirongwa chedu cheZuva.
Nzvimbo yePuddin inotsvaga kupa vagari vedu nharaunda yakazara iyo yakarongedzwa kuti isangane nezvose zvavo zvemuviri, chengetedzo, zvehungwaru, zvekuziva, uye zvemagariro zvavanoda. Imba yedu yakanyatsovakwa kuti inzwe senge imba yakadzika kusvika kune yakanyatso hunyanzvi yezvivakwa uye dhizaini yemukati. Zvimwe zvezvimiro zvedu zvakasarudzika uye zvinowanikwapo zvinosanganisira:
Nzvimbo yePuddin inosvikika zvachose
Imba huru yekuvaraidza uye yeboka zviitiko
Kicheni hombe yakashongedzerwa nemidziyo yechizvino-zvino
Yakakura yekuwachira imba ine maviri akazara saizi washer uye dryer
Raibhurari yega yega ine mukana wekombuta, zvishandiso zvemuhofisi, foni/fax, uye zvimwe zvemuhofisi
Yakawedzerwa yakavharidzirwa muberere rekuseri yakatarisana nebindu rinoyevedza remaruva nemhuka dzakagadzirirwa kukwezva shamwari dzedu dzemunharaunda dzine minhenga.
Handicap inosvikika nzira dzekufamba
Nhengo dzemhuri dzinogamuchirwa nguva dzese! Nzvimbo yePuddin haina maawa ekushanyira akaganhurirwa uye yakagadzirwa tichifunga nezvemhuri dzedu. Yedu yekuvaka chiitiko uye yekunze patio inowanikwa kune yakavanzika mhuri zviitiko uye kuungana zvichienderana nekuwanikwa uye kana Zuva redu Chirongwa chisiri muchikamu. Kune zvakare akasiyana siyana emahotera ari pedyo evaenzi vanoshanya kubva kunze kwedhorobha.